China Professional Tire Inflator ine Geji fekitori uye vatengesi |Sekuru
• Nyanzvi inflator yevhiri ine geji maficha 3-mu-1 basa: inflate, deflate uye kuyera kumanikidza kwevhiri.
• 80mm(3-1/8“) pressure geji (0-12 Bar/174psi)
• 500mm (20“) hosi yerabha yakasimba
• Nyanzvi inofefetera matayi ine geji yakagadzirwa nealuminium die-casting unit yakavharwa nerabha sleeve kuti iwedzere kugadzikana uye kusimba.
• Nyanzvi inflator yevhiri ine geji ine hombe uye iri nyore kuverenga inoratidza dial panel.
• Kuwedzera kuchengetedzwa uye kuderedza zviitiko zvine chekuita nematayi
• Kururama: 0-58psi +/- 2psi, inodarika EEC/86/217
Chikamu Nhamba 192031
Reader Unit Analog Gauge
Chuck Type Clip pamusoro kana maviri musoro chuck
Powered by Hapana simba rinodiwa
Swivel hose kubatana.
Sei Iwe Uchida Tire Pressure Gauge?
Inenge 11,000 mota tsaona gore rega rega zvinokonzerwa nekutadza kwetai, maererano nefungidziro neNational Highway Traffic Safety Administration.Matai akadzikira pasi anotariswa sechikonzero chikuru chekutadza, nepo matayi akakwiridzirwa zvakanaka anogona kupa kuwedzera kwe3.3% muhupfumi hwemafuta - uye anogona kungoponesa hupenyu hwako.
Kuchengeta matai emota yako akanyatsofefeterwa kune zvinokurudzirwa neautomaker chinhu chakakosha pakugadzirisa matayi.Matai ane huwandu hwakatarwa hwekumanikidza kwemhepo anogara kwenguva refu uye anobatsira kuchengetedza mota.
Ngozi uye mutengo kukanganisa
Kudzikira kwetayi kunokanganisa mabhureki madaro uye kunopa kushoma kuterera chidhiraivho nekubata.Izvi zvinogona kuva nengozi zvikuru kana pachidiwa kumira kwechimbichimbi kana kuti nzira yokunzvenga kamwe-kamwe kudzivirira kubonderana.
Pamusoro pezvo, kuderera kwesimba kunobvumira madziro epamativi ematayi kuti anyanye kupfakanyika zvakanyanya, izvo zvinogadzira kupisa.Nepo kupisa kuri pakati nepakati kunongowedzera kupera kwetai;kupisa kwakanyanya kunogona kutungamirira mukurasikirwa kwezvikamu zvekutsika kana kunyange kuputika.
Underinflated matayi zvakare ane yakakwirira rolling resistance, izvo zvinoderedza hupfumi hwemafuta.Uye, vanopfeka nekukurumidza kumapendero ekunze ekutsika, izvo zvinoreva kuti kutsiva kuchave kuri madikanwa nekukurumidza pane nematayi akanyatsoputirwa.
Matayi akafurirwa zvakanyanya inyaya shoma.Matai emazuva ano anogona kutsungirira nyore nyore dzvinyiriro dzinopfuura dzinorumbidzwa nokuda kwokutyaira kwomuzvarirwo.Nekudaro, matai anogara achiwedzerwa zvakanyanya anopa kukwira kusingaenderane uye kutambura zvakanyanya kukurumidza kupera pakati pekutsika, izvo zvinoreva zvakare kutsiva kuchave kuri madikanwa nekukurumidza kupfuura nematayi akanyatsoputirwa.
Kusarudza zvakakodzera matai kumanikidzwa
Nongedzera kubhuku remuridzi wemotokari yako kana kuti tsinhiro yetaiyi pamutyairi-padivi pedhoo.Kumota dzekare dzemodhi (2003 risati rasvika), ruzivo rwekukwira kwemitengo yematayi runogona kunge rwuri mukati megonhi rebhokisi regirovhosi, peturu yekuzadza mafuta, kana chivharo chetrunk.Usashandise kudzvanywa kwakaumbwa mumadziro evhiri.Izvi zvinoratidza dzvinyiriro inodiwa kuti isangane nekuzara kwekutakura mutoro wevhiri, kwete kumanikidzwa kwakanangana nemota yako.
Vagadziri veMotokari vanopa ekutanga matai kumanikidza maratidziro ayo anogona kusiyana kubva kumberi kuenda kumashure, uye zvakare kana mota yazara kana kushandiswa kutyaira mugwagwa mukuru.Kudzvinyirirwa kwepamusoro kunowedzera huwandu hwekutakura uye kuderedza kupisa kwekuvaka.
Mamwe mapikicha uye mota dzekushandisa dzemitambo dzine matai erori akaremerwa akanzi "LT" pamadziro.Iyo inokurudzirwa inflation pressure yemavhiri erori akareruka anogona kusiyana zvakanyanya zvichienderana nekuremerwa kwemotokari nemashandisirwo.
Zvakapfuura: Pistol Grip Tire Inflator ine Gauge
Zvinotevera: Handheld Automatic Tire Inflator
Tire Inflator Pfuti Ine Gauge, Liquid Yakazadzwa
Chirema Dur Rori Tire Pressure Gauge
MARIA Chiisana Uta Dailymoti With Gauge
Tire Inflator Pfuti With Gauge